- Page 52 of 86 - News and Entertainment
နွားနို့ ၂ခွက် နေ့စဉ် သောက်ရင် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုဆိုလို့ ငြင်းကြ ခုန်ကြပြီ
နွားနို့ ၂ခွက် နေ့စဉ် သောက်ရင် ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုဆိုလို့ ငြင်းကြ ခုန်ကြပြီ အမေရိကန် သုတေသီတွေက နွားနို့နဲ့ ပက်သက်ပြီး လေ့လာဆန်းစစ်မှု တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် နေ့စဉ် နွားနို့ မက်ခွက် ၂ခွက် သောက်ပါက ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ချေ ပိုရှိတယ်လို့ ဆိုလာပါတယ်။ လိုမာလင်ဒါ ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ်က ပြုလုပ်တဲ့ သုတေသန စာတမ်းမှာ အသက် ၅၇ နှစ်ဝန်းကျင် အမျိုးသမီး ၅၂၀၀၀ ကို သူတို့ စားသောက်တဲ့ အလေ့အထကို ထိန်းချုပ်ပြီး နွားနို့ပါဝင်မှုကို တွက်ချက်ကာ သုတေသန လုပ်ခဲ့ ပါတယ် လို့ ပါရှိပါတယ်။ သူတို့ကို မေးခွန်းတွေနဲ့ အပြန်အလှန် မေးမြန်းမှုတွေ …
တရုတ်က ပထမဆုံးအနေနဲ့အမေရိကန်အာလူး ဝယ်ယူ
တရုတ်က ပထမဆုံးအနေနဲ့အမေရိကန်အာလူး ဝယ်ယူ ၂နိုင်ငံ သဘောတူညီမှု အဆင့် ၁ အဖြစ် အမေရိကန် အာလူးထုတ်လုပ်သူတွေက အာလူးချောင်းကြော်ပြုလုပ်ရန်အတွက် တရုတ်နိုင်ငံသို့ အာလူးများကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ စတင် တင်ပို့ ကြပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က သုံးသပ်ချက်အရ အမေရိကန် အာလူးထုတ်လုပ်သူတွေက တရုတ်ဈေးကွက်ထဲကို အလုံးလိုက် အရင်းလိုက် တင်သွင်းနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းကြတယ်။ ဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေစိုက် အမျိုးသားအာလူးကောင်စီမှ စီအီးအို ကင်မ်ကာလီ က “တကယ့်ကို စိတ်လှုတ်ရှားစရာကောင်း တယ်ဗျာ။ တရုတ်တွေဖက်က တံခါးဖွင့်လိုက်တယ်။ ဈေးကွက်က အကြီးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ အမေရိကန်တွေရဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့ အာလူးတွေကို တရုတ်တွေ လက်ခံရရှိတော့မှာပါ။ ဒါက တကယ့်ကို ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ”လို့ အံ့အားတကြီးဆိုတယ်။ တရုတ်က …
ပန်းသီးရဲ့ အကျိုး ကျေးဇူး
ပန်းသီးရဲ့ အကျိုး ကျေးဇူး ပန်းသီးကို စားသုံးခြင်း သက်သက် တင်မက အလှအပ အတွက် အသုံးပြု လို့လည်း ရရှိနိုင်တယ် ဆိုတာ သင် သိပါရဲ့လား…. တစ်နေ့ကို ပန်းသီးတစ်လုံး တစ်လုံး စားသုံးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကို သာမက သင့် အလှအပ အတွက်လည်း အကျိုးထူး လှပါတယ် ။ အသား အရောင် သင့်အသား အရောင်ကို ဖြူဝင်း တောက်ပ စေနိုင်တာလည်း ပန်းသီးရဲ့ အာနိသင် ပါပဲ ။ပန်းသီးစားခြင်း အကျိုးဟာ အသားအရေကို နုညံ တောက်ပ စေပါတယ် ။ အရေပြားကို တင်းရင်းစေတဲ့ ကိုလာဂျင်နဲ့ အီလက်စတင် ထုတ်လုပ်မှူကို များစေလို့ …
ကောင်းသော အဆီနဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေး
ကောင်းသော အဆီနဲ့ နှလုံးကျန်းမာရေး အဆီ အဆိမ့်စာတွေ စားသုံးခြင်းဟာ နှလုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်နှလုံးအတွက် ကောင်းသော အဆီပါ အစားအစာများ ကို ရွေးချယ်ခြင်း အားဖြင့် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါ။ နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အဆီပါ အစားအစာတွေ ကတော့…. ငါး ငါးတွေမှာ အိုမီဂါ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ် ဆိုတဲ့ အကျိုးပြုအဆီ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန် ၊ မက်ကရာယ် ၊ ဟာအင်း ၊ ဆာဒင်းနဲ့ တူနာ အစရှိတဲ့ငါးတွေဆိုရင် ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ငါးအဆီဟာ နှလုံးကျန်းမာပြီး ဉာဏ်ရည် ထက်မြက်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်မှာ နှစ်ကြိမ် …
ပါပါရာဇီတွေရဲ့ မှန်ပြောင်းကို လွတ်အောင်ရှောင်နေရတဲ့ ကတ်ထရီနာကိဖ်
ပါပါရာဇီတွေရဲ့ မှန်ပြောင်းကို လွတ်အောင်ရှောင်နေရတဲ့ ကတ်ထရီနာကိဖ် ဘောလီးဝုဒ်မှာ သတင်းပြေးနေတဲ့ ကတ်ထရီနာကိဖ် နဲ့ ဗစ်ကီးကူရှယ်တို့ က ပါပါရာဇီတွေရဲ့ မှန်ပြောင်း ကနေ လွတ်အောင် အသည်းအသန် ရှောင်တိမ်း နေရပါတယ်။ ဗစ်ကီက သူတို့က သူငယ်ချင်းတွေပါလို့ ပါပါရာဇီတွေကို ရှင်းပြပေမဲ့လည်း အဲ့လိုရှင်းကာမှ ပါပါရာဇီတွေက ပိုပြီး မယုံသင်္ကာ ဖြစ်ကာ သူတို့နောက်ကို ပေါ်တင် တစ်မျိုး ပုန်းလျှိုး ကွယ်လျှိုး တစ်မျိုး လိုက်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကဆိုရင် သူတို့ ၂ယောက် ချိန်ပြီး ဟိုသွားဒီသွား လုပ်ခဲ့ကြတာကို စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ဓာတ်ပုံတွေ ပလူပျံအောင် တက်လာကြပါတယ်။ သူတို့ ၂ယောက် ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြပါပြီလို့ ရေးတဲ့သူကလည်း …
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ အဆင့်မြင့် သုတေသနစီမံကိန်း အေဂျင်စီ (DARPA)က ရေအောက်သွား ဒရုန်းထွင်ဖို့ ကုဋေ ၁၂ကျော် သုံးစွဲ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ အဆင့်မြင့် သုတေသနစီမံကိန်း အေဂျင်စီ (DARPA)က ရေအောက်သွား ဒရုန်းထွင်ဖို့ ကုဋေ ၁၂ကျော် သုံးစွဲ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ အဆင့်မြင့် သုတေသနစီမံကိန်း အေဂျင်စီ (DARPA)က ရေအောက်သွား ဒရုန်းတွေ လုပ်ဖို့အတွက် လောခ်ဟိမာတင် ကို ကန်ဒေါ်လာ ကုဋေ၁၂၀၀ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ကန်ထရိုက်တစ်ခုကို အပ်ကာ မန်တာရေး စီမံကိန်း စတင် စေခဲ့ပါတယ်။ သာမန်ထက်ပိုပြီး ကြီးတဲ့ အပြင် အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေ အသုံပြုနိုင်တဲ့ ဒရုန်းယာဉ်တွေကို ဖန်တီးဖို့အတွက် ကန်ထရိုက်အပ် လိုက်တာပါ။ DARPAရဲ့ အဆိုအရဆိုရင် မန်တာရေး စီမံကိန်းမှာ ရေအောက်သွား ဒရုန်းတွေက ကာလရှည် နဲ့ ခရီးမိုင်ဝေးဝေး သွားနိုင်ဖို့ကို အခြေခံထားပါတယ်။ …
အရက်သမားထက် အရက်သမ က ပိုများပြီး ပိုသေကြတယ်
အရက်သမားထက် အရက်သမ က ပိုများပြီး ပိုသေကြတယ် ၂၀၀၀ခုနှစ်မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း နှစ်စဉ် အရက်ကြောင့် သေဆုံးသူ အမျိုးသမီး ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာကာ အမျိုးသားများကတော့ ပုံမှန်သေဆုံးမှု အတိုင်းပဲ ရှိနေတယ်လို့ လေ့လာမှုစစ်တမ်းတစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ နယူးယောက်ခ်စီတီး က မောင့်ဆိုင်နိုင်းစိန့်လုခ် ဆေးရုံနဲ့ မောင့်ဆဆိုင်နိုင်းဝက်စ် ဆေးရုံ ၂ခုက အရက်ဖြတ်ဌာန အကြီးအကဲ ဒေါက်တာ တင်မိုသီ ဘရန်နန်း နဲ့ အဖွဲ့က ပြုလုပ်တဲ့ သုတေသန စစ်တမ်း အရ မြောက်အမေရိက မှာ အမျိုးသမီးတွေက နှစ်စဉ် အရက်ကြောင့် သေဆုံးသူ တိုးတက်နေပြီး အမျိုးသားတွေကတော့ ထူးထူးခြားခြား တိုးတက်တာ မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ …
ဆီးကြိတ်ကင်ဆာကို နိုင်နိုင်နင်းနင်း ကုသလို့ရနေပါပြီ ၂၁ရာစုမှာ လူသားတွေအတွက် အအောင်မြင်ဆုံး အရာကို ပြောပါဆိုရင် ဆေးဝါး နဲ့ ဆေးကုသခြင်း အတတ်ပညာပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၅၀လောက်က ကု မရဘူးဆိုတဲ့ ရောဂါ တော်တော်များများကို ဒီဖက်ခေတ်မှာ ကုသနိုင်နေပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ထိ ဆေးပညာ ရှင်တွေ ကုသဖို့ရော ရောဂါရင်းမြစ် ရှာဖွေဖို့ အတွက်ရော ရုန်းကန်နေရတဲ့ ရောဂါကတော့ ကင်ဆာပါပဲ။ နောက်ဆုံးပေါ် သုတေသနတွေက ကင်ဆာကို စောစီးစွာ ရောဂါသရုပ် ခွဲနိုင်ရင် လူ့အသက်ပေါင်း များစွာကို ကယ်ဆယ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာက အမျိုးသားတွေမှာ လေးခုမြောက် အဖြစ်များဆုံး ရောဂါတစ်ခုပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆီးကြိတ်ကင်ဆာရဲ့၅၀% က …
မွေးရပ်မြေကို ကယ်တင်ဖို့ သန်း၁၀၀ လှူတဲ့ BTS အဆိုတော် ဆူဂါ
မွေးရပ်မြေကို ကယ်တင်ဖို့ သန်း၁၀၀ လှူတဲ့ BTS အဆိုတော် ဆူဂါ တောင်ကိုရီးယားမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ဗိုင်းရက်ပြန့်နှံ့ လာမှုက တိုးလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် BTS ဝိုင်းက ရပ်ပါ ဆူဂါ ရဲ့ မွေးရပ်မြေဖြစ်တဲ့ ဒေဂူးမြို့ မှာ ရောဂါပြန့် နှံ့မှု အဆိုးဆုံး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကေပေါ့ ဝိုင်း တွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်ထိ ထိုးဖောက်လာနိုင်ပြီ ဖြစ်တဲ့ BTS က ရပ်ပါဆူဂါက သူ့မွေးရပ်မြေမှာ ရောဂါပြန့်နှံ့နေတာကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်လို့ အဲ့ဒိက ဆေးဝန်ထမ်းတွေ လိုရာ သုံးနိုင် အောင် ဆိုပြီး ကိုရီးယားငွေ သန်း၁၀၀ ကိုပရဟိတ စိတ်ဓာတ်နဲ့ လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ …
ပလက်စတစ်ဆာဂျရီ လုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ရှရူတီဟာဆန်
ပလက်စတစ်ဆာဂျရီ လုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံလိုက်တဲ့ ရှရူတီဟာဆန် ရှရူတီဟာဆန်ဆိုတာ တလူဂူး၊ တမီလ်၊ ဟင်ဒီ ရုပ်ရှင်လောကမှာ နာမည်ရနေတဲ့ မင်းသမီးပါ။ လိုင်းပေါ်မှာ သူမရဲ့ ပလက်စတစ် ဆာဂျရီ လုပ်တာနဲ့ ဝိတ်ချတာကို ပြောကြ ဆိုကြ ငြင်းနေကြ တာကို ရှင်းပြနေရတာ ငြီးငွေ့ လာလို့ သူမက မီဒီယာကနေပြီးတော့ ပလက်စတစ် ဆာဂျရီ လုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ “ကျမတို့ ဘဝမှာ ဒီမျက်နှာလေးနဲ့ လုပ်စား နေရတာပါ။ ဒါလေးကို အလှမပျက်စေချင်တာရယ်။ နောက် ရိုက်ရမယ့်ကားက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဇာတ်ရုပ်ဖြစ်နေတော့ အသက် ၃၄ နှစ်ဖြစ်နေတဲ့ ကျမက ငယ်သွားအောင် ဝိတ်ချလိုက်ရတာပါ။ လက်ရှိပုံနဲ့ …
Previous 1 … 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 … 86 Next